တစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အကြောင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ အတိတ် နိမိတ်များ – Shwe Yaung Lan
HomeKnowledgeတစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အကြောင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ အတိတ် နိမိတ်များ
တစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အကြောင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ အတိတ် နိမိတ်များ
May 18, 2021 Admin Knowledge 0
တစ်စုံ တစ်ယောက် က သင့် အကြောင်း တွေးနေ တာကို သိနိုင်မယ် ထင်လား? သိရော သိချင်လား?
ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေက သင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေ တွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ဘာကိုတွေးနေလဲဆိုတာ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ၂ ခါနှာချေတာဟာ တစ်စုံ တစ်ဦးက သင့်မကောင်းကြောင်းပြောနေပြီ ဆိုတာပါပဲ။
၃ ခါနဲ့အထက် နှာချေတာကတော့ သင့်ကောင်းကြောင်းတွေ ကိုတွေးနေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိလွမ်းနေပြီး သင့်ကို ချစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီလူက ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်းပြောပြဦးမယ်နော်..
ရိုးရာအစဉ်အလာနည်းလေး အရဆို သင့်ဘေးက လူတစ်ယောက်ယောက်ကို သူကြိုက်တဲ့ ဂဏန်း ၃ လုံးပါတဲ့ နံပါတ်တစ်ခု ကိုပေးဖို့ပြောပါ။
ဘယ်လို တွက်ချက်မလဲဆိုတော့ သင့်ကို ၂၊ ၃၊ ၁ ဆိုတဲ့ဂဏန်း ၃ လုံးကို ပေးထားတယ် ဆိုပါတော့။
အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းကြည့်ပါ။ ၂+၃+၁=၆ ရတယ်။
သင့်ကိုစကားလုံးတွေ နဲ့ရိုက်နှက်နေသလိုပေါ့။ ဒီခံစားမှုက သင့်ရဲ့ပါးနဲ့နားက ရှက်လို့မျက်နှာ ရဲသွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်။
တစ်ခါတစ်ရံ တော်တော်ကြီးကို သိသိသာသာနီရဲနေတာမျိုးဖြစ်တာပါ?
တစ်ကယ်လို့ သင့်နားနဲ့ မျက်နှာက ပူလောင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ နွေးထွေးမှုကို ခံစားရရင်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကေင်းကြောင်းတွေ ကိုပြောနေပြီး သင့်ကိုချစ်ကြိုက်သလိုခံစားနေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ကို မကောင်းတဲ့ စကားကိုပြောခြင်းသို့ မဟုတ်သင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာစဉ်းစားနေတာကိုသင်ပြောနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလည်းရှိပါတယ်။
လူတချို့အနားရောက်မှ သင်ကြို့ထိုးချင်လာတယ် ထိုးလိုက်တယ်။ ဒါက ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ ဒီလူတွေဟာ သင့်ကိုထိ ခိုက်နစ်နာအောင်တွေးနေတယ် ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ယခုသင်သူတို့ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်ကြို က်သလို မေးမြန်းကြည့်လို့ရပြီ။
တစ်စုံတစ်ခုသောက်တာများခြင်း၊ အလွန်လျှင်မြန်စွာအစာစားခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်ထားခြင်း၊ အာရုံကြော – ယားယံရောဂါများရှိခြင်း၊ ဆေးတစ်ခုခုသောက်သုံးထားခြင်း၊ ဒါတွေကိုတော့ထည့်မတွက်ဖို့လိုပါတယ်နော်..
သင်နှင့်ပတ်သက်သောသူတွေရဲ့ အတွေးတွေက သင်အိပ်မက်မက်ဖို့အတွက် ရုပ် ပုံလွှာတွေကို ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ သင့်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စဉ်းစားတွေးတောနေရင် သူတို့ရဲ့ခံစားမှုက သင့်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်နဲ့ဆင်တူတဲ့ မက်ဆေ့တစ်ခုခုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီအတွေးတွေဟာ ကောင်းလားဆိုးလား သေချာပေါက်ပြောလို့တော့မရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သင့်ကိုလာထိသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထိတွေ့မှုလို ခံစားရရင် ဒါက သင့်ချစ်ရသူ ဒါမှဟုတ် သင့်ကိုခံစားချက်ရှိနေသူတစ်ဦးထံကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ထိတွေ့မှုဟာ ညှိုးငယ်ကြောက်ရွံသလို ခံစားရရင် ဒါက သင့်ကို စိတ်ဆိုးနေသူ သို့မဟုတ် သင့်ကြောင့် ဝမ်းနည်းနေရသူတစ်ဦးဦးထံက ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုသင့်ဘေးပတ်လည်မှာ သင်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်တင်းမာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူမှ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ သင့်အကြောင်းတွေပြေးလွှားယောက်ယက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။
Credit to Mg Htet
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ (၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး
အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာတဲ့ သူတွေအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝဆေးနည်း